သက်ဝေ: ဆယ်ပြားတန် ချောကလက်နှင့် ဆက်စပ်၍...
YeTun Photography August 10, 2013 at 12:39 AM
မှန်၏ လို့ပဲ ပြောတော့မယ်... အင်း နောက်ဆက်စပ်စဉ်းစားမိသွားတာလေးတစ်ခုက စင်ကာပူမှာနေတုန်းက အမြဲလိုလိုပြောဖြစ်တယ့် စကားလေးတစ်ခွန်း ရှိတယ် Good No Cheap, Cheap No Good ဆိုတာပဲ
Hmoo August 10, 2013 at 2:56 AM
ညီလင်းသစ် August 10, 2013 at 6:18 AM
အမှန်ပဲဗျို့...၊ အခုနောက်ပိုင်း စီးပွားရေး သမားတွေက အသုံးချ စိတ်ပညာကို အရည်ကျို သောက်ထားသူတွေချည်းပဲ...၊ လူတွေရဲ့ တွေးခေါ်ပုံကို ကျေညက်လွန်းလို့ ဘယ်လိုဆင်လိုက်ရင် ဘယ်လို ဝင်လာမလဲဆိုတာ အတပ်သိနေပြီးသား...၊း)
အင်း.. အိမ်ကနေ စောစောထွက်ပြီး ဆယ်ပြားတန် ချောကလက်ကို သွားတန်းစီနေမယ့် လူတွေကတော့ ဆက်ပြီးရှိနေဦးမှာ သေချာတယ် အစ်မသက်ဝေ...။း))
တန်ခူး August 10, 2013 at 8:07 AM
အပြည့်အဝထောက်ခံမိတယ်သက်ဝေ. အချိန်ရဲ့တန်ဖိုးကို မေ့လျော့သွားစေအောင် စီးပွားရေးသမားတွေရဲ့ သားကောင်ဖြစ်သွားတာ တွေးကြည့်ရင် ခါးသက်စရာပါ. နောက်တခု သံသယဖြစ်မိတာက ဒီနိုင်ငံကလူတွေ အလုပ်ချိန်ပိုတိုးလုပ်မိအောင် ပါးနပ်စွာချထားတဲ့အကွက်များလားလို့ ပါ.
ဆုမြတ်မိုး August 12, 2013 at 9:30 AM
ဆုမြတ်တို့စီနီယာလည်း ရထားခပိုက်ဆံလျော့ပေးတည်းက အမြဲတမ်းရုံးစောလာတော့တာပါပဲ ၊ ပိုက်ဆံလေး ပြားစွန်းနဲ့ တော်တော်အပင်ပန်းခံကြတယ်နော် ။
Ma Tint August 12, 2013 at 10:51 AM
ခေတ်ရေစီးကြောင်းနဲ့အတူ ပြောင်းလဲလာတဲ့ စီးပွားရေးလောကလို့ ဆိုရလေမလား မသက်ရေ..
ကြည်ဖြူပိုင် August 12, 2013 at 5:51 PM
မှန်ပါ့ မမသက်ဝေ ရယ်။ အလကားသာပေးရင်ပေကပ်တန်းစီနေတဲ့စလုံးတွေအများကြီးပဲနော်။ ဒါမျိုးဆိုသူတို့ဇွဲသိပ်ကြီး
Hmoo August 17, 2013 at 3:17 AM
စားစရာမရှိရင်တော့တန်းစီတာကိုဘဲပျော်စရာပွဲတော်လုပ်ခွင့်ပေးပါအန်တီရယ်၊ချော့လက်ချားမယ်၊ဘယ်လောက်ရှည်ရှည်ဒို့ဘယ်တော့မှဝေးဘူး ... :)